အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး - Torch နဲ့ LED
အကောင်းဆုံးဖလက်ရှမီး - Torch LED ကို APK ကို
Video Zoom နှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှေ့ကင်မရာဖလက်ရှမီး - အခမဲ့လီမိတက်အချိန်များအတွက်! အမြန်ဆုံးရှေ့ကင်မရာမှန်ဘီလူး Torch Light က! စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့! အကောင်းဆုံးရှေ့ကင်မရာမှန်ဘီလူးဖလက်ရှမီးရယူပါ! အခမဲ့အခုတော့များအတွက် Download!
အလျင်မြန်ဆုံး, အတောက်ပ Get နှင့်အများဆုံးဖုန်းများ & တက်ဘလက်များအတွက်ဗီဒီယိုကင်မရာ zoom ကိုအတူကြွယ်ဝသောရှေ့အလင်းပါရှိပါတယ်။ ဒီ app ကင်မရာအလင်းအဖြစ်ကိရိယာပေါ်တွင်ရှေ့ကင်မရာအလင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့သင်၌ချဲ့ရန်ခွင့်ပြုသည်! အလင်းကဲ့သို့ကောင်းစွာမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပိတ်နိုင်အောင် Plus အားသင် setup ကိုတစ်ဦး timer နေရာမှာနိုင်ပါတယ်။ ထိုဒေသတွင်မှိန်အခါသင်တို့သည်လည်းသင့်ကင်မရာ zoom ကို Flash မီးအလင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်မီးရှူးတိုင်လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကိုသုံးနိုင်သည်နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်!
Video Zoom နှင့်အတူ * တပ်ဦးအလင်း (ရှိရမည်)
* Slider ကအသုံးပြုခြင်းကို LED အလင်းတောက်ပမှု Adjust
အထူး Feature ကို: Flash ကိုအလင်း + Video Zoom ကြည့်ရန်
စက်တင်ဘာလ 4, 2014 မှာ 11: 11 နံနက်
မဆိုလမ်းကင်မရာနှင့်အတူ Flash ကိုများအတွက် default အနေနဲ့ app တစ်ခုရှိသေး၏။
flash ကိုအတူ vedio လျှင်ကောင်းသောဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါကဘက်ထရီကိုစားသိကြ ... ဒါပေမယ့်ရှိသည်ဖို့ကောင်းသောအရာ Hacking ကို။
မေလ 17, 2014 မှာ 9: 36 နံနက်
android apps များအဘို့ wow, ကောင်းတဲ့ site ကို ... ။
ယင်း၏အကြီး: A) ကို
Buza theophile says:
မတ်လ 10, 2014 မှာ 12: 05 နံနက်